श्रीमानकोले काम नगर्ने भएपछि भाईबाट ‘गर्भवती’ बने, बच्चामा केही असर पर्ला ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/श्रीमानकोले काम नगर्ने भएपछि भाईबाट ‘गर्भवती’ बने, बच्चामा केही असर पर्ला ?
श्रीमानकोले काम नगर्ने भएपछि भाईबाट ‘गर्भवती’ बने, बच्चामा केही असर पर्ला ?
4954minutes read
डाक्टर साब म ३७ बर्षीय बिबाहित महिला हुँ । सन्तानको रहर हामी दुवैमा औधी थियो र छ । बिबाह भएको १० बर्ष बित्यो । बच्चा नभएपछि श्रीमान् र मेरो दुवैको परिक्षण गर्दा श्रीमानको पक्षबाट पूर्ण रुपमा काम नगर्ने थाहा भयो । यो कुरा डाक्टरले मलाई मात्र भन्नु भएको थियो । उहाँलाई औषधिले ठिक हुन्छ रे भनिदिए ।
त्यसपछि मैले त्यो थाहा पाएपछि आफ्नै भाईसँग सम्बन्ध राखेर बच्चा बनाए । पछि अनुहार फरक नआओस् र श्रीमानको परिवारले शंका नगरुन भनेर मेरो बुद्धिले यसो गरेकी हुँ । तर हाडनातामा बच्चा रहे सन्तान राम्रो नहुँने सुनेकी छु । मेरो भावी सन्तानमा केही समस्या आँउछकी भन्ने डर धेरै छ । जिज्ञासा मेटाईदिनुहोला । –श्रृष्टि
जवाफ- तपाईले अहिलेसम्म आएका भन्दा अत्यन्तै अनौठो र फरक खालको समस्या राख्नुभयो । यो विज्ञानसँग जोडिएको विषय हो । तपाईले के जान्न जरुरी छ भने स्वास्थ्य विज्ञानले एउटै गोत्रमा समेत विवाह गर्दा सन्तानमा देखिने असर औल्याएको छ । यही कारण धार्मिक रुपमा नै एउटै गोत्रमा बिबाह नि षेध गरिएको हो ।
छोरा जन्मनुमा उसको पिताको मुख्य भूमिका हुन्छ । छोरा जन्मनुमा पिता नै निर्णायक हुन्छ । पिताको वाई क्रो’मोजोम विना छोराको जन्म असम्भव
अब एउटै सन्ततीको सम्बन्धबाट बच्चा र त्यसबाट सन्तान उत्पादन कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । तर तपाईको केशमा भयो । भने यहाँ कस्ता असर जमाउछ भन्ने कुरामा म समान गोत्रमा देखिने समस्याका बारेमा उल्लेख गर्छु । तपाईको विषयसँग ठ्याक्कै मिल्नेछ ।
वर्तमान जीव विज्ञान तथा सन्तान उत्पादनसँग सम्बन्धित विज्ञानले वताए अनुसार स्त्री को पेटमा बच्चा हुनका लागि मानव शरिरको विकास दुइटा सेलबाट सुरू हुन्छ । एक सेलमा २३ जोडी क्रो’मोजोम हुन्छन् ति मध्य एक सेल आमाबाट र एक सेल बुवाबाट आएका हुन्छन् अर्थात हाम्रो शरिरमा जम्मा ४६ वटा क्रो’मोजोम हुन्छन् ।
ति ४६ वटा क्रो’मोजोम अर्थात २३ जोडी क्रो’मोजोम मध्य एक जोडी क्रो’मो जोमलाई लै”ङ्गिक क्रो’मोजोम भनिन्छ । त्यही एक जोडी क्रो’मोजोमले व्याक्तिको लि”ङ्ग निर्धारण गर्दछ । यो वैज्ञानिक आधार अनुसार वाई क्रो’मोजोम केवल पुरुषमा मात्र हुन्छ । सन्तान उत्पादनमा वाई क्रो’मोजोमबाट छोराको जन्म हुन्छ । अर्थात छोरा जन्मनुमा उसको पिताको मुख्य भूमिका हुन्छ । छोरा जन्मनुमा पिता नै निर्णायक हुन्छ । पिताको वाई क्रो’मोजोम विना छोराको जन्म असम्भव छ ।
छोरी जन्मनुको निमित्त पिताको एक्स क्रो’मोजोम र आमाको एक्स क्रो’मोजो’म मिल्नुपर्ने हुन्छ । जबकी छोरा जन्मनको निमित्त पिताको वाई क्रो’मोजोम र माताको एक्स क्रो’मोजोम मिल्न आवस्यक हुन्छ । विज्ञानले प्रमाणित गरे अनुसार स्त्रीमा केवल एक्स क्रो’मोजोम मात्र हुन्छ वाई क्रो’मोजोम हुँदैन वाई क्रो’मोजोम पुरुषमा मात्र हुन्छ ।
तसर्थ छोराको जन्म उसको बाबुको वाई क्रो’मोजोमका कारण हुन्छ र यो वाई क्रो’मोजोम क्रमशः पिताबाट छोरा, नाति, पनातिमा हुँदै एवं रितले हुँदै अघी बढ्छ । जबकी महिलाको एक्स क्रो’मोजोम र पुरुषको एक्स क्रो’मोजोम मिलेर जन्मेकी छोरी अर्कै पुरूषसँग विवाह हुँदा उसको एक्स क्रो’मोजोम अन्य वंशसँग मिक्स हुँदै जान्छ र पितातिरको एक्स क्रोमो’जोमको अस्तित्व समाप्त हुँदै जान्छ । जबकी पुरूषको वाई क्रो’मोजोम कसैसँग मिक्स नभइ अनवरत रुपमा अघी बढ्छ ।
युगौं युगसम्म आफ्ना भाइवन्धुहरूको पहिचान कायम राख्नु थियो तसर्थ गोत्र प्रणाली नितान्त जीव विज्ञान र सन्तान उत्पादन विज्ञानमा आधारित
पुरुषको जन्मको कारण वाई क्रो’मो’जोम नै हो, जुन उसको पिताबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । अर्थात पुरूषको वंश वा जिन वाई क्रो’मोजोम आफ्नो पुर्खाको मात्र हुने हुँदा नवजात पुरुषको गोत्र उसको पिताको गोत्र कायम रहन्छ भने महिलाको गोत्र विवाहपछी उसको श्रीमानको गोत्रमा परिणत हुन्छ किनभने त्यस महिलाबाट जन्मिने पुत्रको वाई क्रो’मोजोम उसको अथवा मुख्य जीन वा वंश उसको पतिको हुनेहँदा त्यो महिलाको गोत्र पनि उसको श्रीमानको गोत्रमा विलय भएर जान्छ ।
अर्थात स्त्रीले आफ्नो जन्मको वंशको जीन बोक्दैनन् जबकी पुरुषले आफ्नो हजारौं वर्ष पुरानो पुर्खाको वाई क्रो’मोजोम बोक्दै आइरहेको हुन्छ । त्यस कारण पुरुषलाई वंशको प्रतिनिधी मानिन्छ । त्यसैले गोत्र प्रणालीको विकासको मुल कारण वाई क्रो’मोजोमको पहिचान गर्दै युगौं युगसम्म आफ्ना भाइवन्धुहरूको पहिचान कायम राख्नु थियो तसर्थ गोत्र प्रणाली नितान्त जीव विज्ञान र सन्तान उत्पादन विज्ञानमा आधारित छ ।
सगोत्री विवाह निशेध गर्नुका पछाडी पनि माथी उल्लेखित कारण मुख्य हो । यदी एउटै गोत्रका पुरुष र महिलावीच विवाह भएमा त्यही वंशको वाई क्रो’मोजोमबाट सन्तान जन्मदा त्यो बालक त्यो स्त्रीको पिताको वंश समान हुन जान्छ, किनकी त्यस बालकको वाई क्रो’मोजोम र त्यस स्त्रीको पिताको वाई क्रो’मो’जोम एउटै हुन्छ । यस हिसाबले सगोत्रीसँग विवाह भनेको एउटै सन्तानका भाइ र बहिनीवीचको विवाह सम्बन्ध जस्तो हुन जान्छ ।
यस्तो हुन गए ग म्भिर जैविक असर उत्पन्न हुन्छ भनि जिव वैज्ञानीकहरूले भनेका छन् । उनिहरूका अनुसार एउटै गोत्रमा विवाह हुँदा केटी र केटाको जीन एउटै हुँदा त्यसबाट जन्मिने सन्तानमा केही जैविक कमि वा शारि रिक तथा मा नसिक विचलन जस्तो सम-स्या उत्पन्न हुन सक्ने प्रसस्त सम्भावना रहने हुँदा पनि सगोत्री विवाह अस्विकृत गरिएको हो ।
सगोत्री विवाह हुँदा वंशको कुल बि-ग्रन्छ भन्ने प्रचलन पनि वैज्ञानिक वास्तविकतामा आधारित छ ्उक्त भयावह असरबाट बच्न सगोत्रविवाहको निषेध शास्त्रीय रूपमा नै गरिएको गरुडमहापुराण अनुसार सगोत्रमा विवाह हुँदा जन्मने सन्तान गलत मनिन्छ्र जीवविज्ञानीहरूका मतअनुसार वाई क्रो’मोजोम लाखौं वर्षसम्म पनि परिवर्तन नहुने र एउटै रुपमा रहि रहने हुँदा त्यसको सहि उर्वरा शक्ति हाँसिल गर्न फरक वंशको एक्स क्रो’मोजोम आवस्यक हुन्छ ।
हाम्रो परम्परा, धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज आदी वास्तविक अर्थमा अत्यन्त वैज्ञानिक आधारमा आधारित रही प्रचलन
जसरी एउटा अन्नको बिउ लगातार एकै ठाउँमा लामो समयसम्म लगाउँदा बि-ग्रिन्छ त्यस्तै वाई क्रो’मोजोम पनि आफ्नै वंशको एक्स क्रो’मोजोमसँग मिल्दा त्यसको सही विकास नहुने र सन्तानमा शा रिरिक तथा मा नसिक विचलन उत्पन्न हुने प्रवल सम्भावना रहने हुनाले विवाह फरक वंशसँग गर्दा मात्र वाई र एक्स क्रो’मोजोमको सही ढङ्गले विकास हुन पाउँछ ।
अब यति भनिसकेपछि तपाईले जन्माएको सन्तानमा के असर पर्ला तपाई आफैले जवाफ पाएको हुनुपर्छ । तपाइले त यो ग ल्ती गर्नुभयो । अबदेखि हाम्रो समाजले मात्र हैन विश्व समुदायले नै यो ग’ल्ती नगरोस् ।
यो सामाग्री काठमाडौका एक प्रख्यात चिकित्सकसँग आएको जिज्ञासामा उहाँले दिएको जवाफमा आधारित जनवोली डटकमको सहयोगमा तयार पारिएको हो ।
भाउजु सुनिता र देवरको एउटै सारीको फे रमा ला#श
“म गर्भवती बन्न चाहान्छु तर बच्चा आफु संग राख्न चाहान्न
यस्तो होला भन्ने सोचेको थिएन युवती साथीको कोठामा जाँदा !